IAluminiyam eyandisiweyo yentsimbi
IAluminiyam eyandisiweyo yeMeshali yeMesh yenziwe kwi-aluminium ipleyiti e-punching efanayo / yatyibilika kwaye yoluliwe, yenza ukuvuleka kwedayimani / i-rhombic (standard). Ukwandiswa, iplate ye-aluminium mesh iya kuba yimo ixesha elide phantsi kweemeko eziqhelekileyo. Isakheko esenziwe yidayimani kunye neetranses zenza olu hlobo lwe-mesh grille luqine kwaye luqinile. Iiphaneli ezandisiweyo zeAluminiyam zinokwenziwa ngeendlela ezahlukeneyo zokuvula (ezinje ngohlobo oluqhelekileyo, olunzima kunye noluthambileyo). Iintlobo ngeentlobo zeeyileji, ubukhulu bokuvula, izixhobo kunye nobungakanani bephepha ziyaveliswa. Zive ukhululekile ukunxibelelana nathi ukuba unomdla.
Intsimbi engenasiciko enemisonto emide ekhawulezayo
Imiboniso ephezulu yensimbi engenanto iikhonkco zentsimbi kunye nesangqa kwelinye icala kwaye zenziwe nge-304 okanye i-316 yentsimbi.Ngaphandle ikhonkco lisendaweni, umane ususa umkhono endaweni yokuvula ukuze uzivale. into emnandi kukuba ayizukugungqa ixesha elingaphezulu lexesha, nakwiimimoya ezinobushushu. Nangona zihlala ziziza ngobukhulu obuphakathi kwe-3mmmm ukuya kwi-14mm, ukuba kukho ubungakanani obuthile obujongileyo sicela usibuze njengoko kunokwenzeka ukuba sikwazi ukubonelela.
I-Balustrde kunye nokukhusela i-railing yensimbi yentsimbi yomnatha
Intsimbi ye-balustrade yentsimbi engenasici ilungele ukuthengiswa kwe-balustrade, njenge-stair balustrade, i-balcony balustrade kunye ne-balustrade yecala. Isithuba esongezelelekileyo, ifuthe elingakumbi, ukhuseleko olungakumbi, i-mesh yensimbi engenazintsu yokuphinda kwenziwe istayile sokwakha izitepsi zesakhiwo sokuhlala kubonelela ngokhuseleko ngokunjalo nokuba yinto yoyilo. Isicingo esine-wireless wire wire mesh's mesh's mesh's ine-erformance eguquguqukayo, phantse ingabinako, eyona nto iphikisayo kunye nokuqhekeza okumelana nayo, uninzi olunokumelana nemvula, ikhephu kunye noqhwithela.
Inzimbi yeentaka iAvanary Mesh, iNetary yeAntara kunye neMesh yeAviary yeentaka, iinkukhu, iiParots, Eyona nto isetyenziswa kakhulu yiKnotted Mesh, i-mesh engenasici yeewheel, iluhlobo lwe-mesh ye-weave ecacileyo eyenziwe ngezandla, nganye intambo ye-warp ewela ngokuchaseneyo ngentla nangaphantsi kwentambo nganye yentsimbi. Iintsontelo zentsimbi yeWarp kunye ney weft ngokubanzi zinobubanzi obufanayo.
Imilambo ebiyelweyo yengonyama
Imitha yokuvalelwa kwengonyama iyakhiwa ngokuthe rhoqo ukusuka kwi-mesh yensimbi engenasiphene okanye i-mesh yeentambo ezihlanganisiweyo, iinguqu eguquguqukayo yentsimbi yomnatha wentsontelo, ithala lengonyama kunye ne-tiger ye-tiger, Ukuba noqoqosho kunye nokusingqongileyo, ukuvulwa ngokulinganayo kunye nokubonakala okucacileyo, ucingo lwe-mesh yeentambo lunokunikezela ngokuchanekileyo iimeko zokunxibelelana iindwendwe. Sisebenza ngentsimbi ye-mesh yensimbi engenazintsimbi apha e-China, siyile kwaye sivelise ubungakanani obahlukeneyo be-mesh evalelweyo yengonyama ngokufanelekileyo.
I-Anti-drop Wire Rope Mesh, ephosa izinto zokuthintela ukhuseleko, yenzelwe ukuthintela umngcipheko Wokulahlwa kwezinto kunye nokwenza indawo yomsebenzi ikhuseleke. Ukuwa okanye ukuhla kweengozi kwenzeka xa into ithe yawa ukusuka kwindawo ephakamileyo kwaye yabangela ukonakala kwezixhobo, ukwenzakala okanye ukufa.Lonto ayisoyiki nje ukhuseleko lwabasebenzi kodwa nezixhobo ezibalulekileyo kwindawo enokubakho yempembelelo.